Somaliland: Nin Shiinays Ah Oo Qaatay Diinta Islaamka Oo Xalay Tawxiidka Loogu Laqimay Masaajid Ku Yaalla Hargeysa - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Nin Shiinays Ah Oo Qaatay Diinta Islaamka Oo Xalay Tawxiidka Loogu...
Koox ka mid ah Culimada iyo odayaasha wax-garadka ah ee Masaajidka Jaamacal Khayr ee Xaafadda Qudhac Dheer ee Degmada Maxamuud Haybe caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa Ashahaadada u qabtay tawxiidkana u laqimay Dalxiise Shiinays ah oo muddoba ku sugan Caasimadda Hargeyda.
Ninkan Shiinayska ah oo la sheegay in uu isagu doortay in uu soo galo diinta Islaamka ayaa odayaal uu ka mid Aadan Warsame Guuleed ay kula kulmeen xaafadda Sayladda ee Caasimadda Hargeysa kuwaasi oo markii ay la sheekaysteen geeyey Masaajidka ay ku xidhan yihiin oo ah Masaajidka Jaamacal Khayr ee Xaafadda Qudhac Dheer oo dhinaca Hawd kaga beegan Sayladda Xoolaha kuwaasi oo salaaddii Maqrib ee shalay kadib Masaajidkaasi tawxiidka ugu qabtay ninkan Shiinayska ah oo la sheegay in uu sheegtay in uu yahay dalxiis dalal dahwr ah oo adduunka ah soo maray sida Suudaan iyo dalal kale.
Oday Aadan Warsme Guuleed oo Wargeyska Foore arrinka ninkan wax ka waydiiyey ayaa sheegay in ninkaasi ay kula kulmeen goob maqaaxi ah oo xaafadda ay deggan yihiin ah markii uu arkayna uu moodayay in uu yahay nin Japanese ah uu isku dayay in uu ereyo kooban oo uu Aadan ka yaqaano Af Japanka uu ku tuuray balse ninkii u shaagay in aanu Japanese ahayn ee uu yahay nin Shiineys ah kadibna ay isku af garteen qaddar kooban oo luuqadda Ingiriisida ah.
Aadan Warsame Guuleed oo arrintaasi sii faahfaahinayaa waxa uu yidhi: “Adeer waxaan isku dayay in aan ninkan waraysto. Kelmad kali ah oo aan ka aqaanay luuqadda Japanese-ka ayaan ku tuuray waxuuse ii sheegay in uu yahay nin Chinese ah. Markii aannu xog waraysannay waxa uu noo sheegay in uu dalal badan oo adduunka ah soo maray sida Suudaan, Itoobiya iyo dalal kale oo Afrika ah oo uu sidaa ku soo gaadhay dalkeena. Waxa uu sheegay in uu yahay nin Dalxiise ah. Waxa uu noo sheegay in uu doonayo in uu muslimo. waxa uu iga codsaday in aan diinta Islaamka wax uga sheego isna waxa uu ahaa nin baraarugsan oo u muuqday nin soo fahmayay wanaagga diinta. Waxa uu ii sheegay in dalalkii badnaa ee uu soo maray uu ku arkay in dadka islaamka ahi yihiin dad wanaagsan oo naxariis badan. Waxa aannu iska xil saarnay in aannu Masaajidka gayno sidaasi ayaanan ku gaynay. Markii uu dahaaro qaatay ayaannu u waysaynay kadibna sidaasi ayuu sheekhii masaajidku shahaadada ugu qabtay oo ku muslimay salaaddii maqribna nagula tukaday”.
Arrinkan xiisaha leh ayaa ah in dadweyne aad u tiro badani ku soo xoomeen masaajidkii iyo ninkii shiinayska ahaa ee diinta islaamka qaatay kaasi oo ay Aadan Warsme iyo dadkii hawshan iska xil saaray u soo galbiyeen markii dambe huteelka uu ka deggan yahay caasimadda Hargeys